ILakefront Cottage eneSandy Beach enkulu - I-Airbnb
ILakefront Cottage eneSandy Beach enkulu
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSarah
Eli chibi likhaya le-rustic ene-flair yangoku kunye nolwandle oluhle lwesanti kunye nedokhi yabucala elungiselelwe ukonwabela iholide yakho. Le ndlu yangasese ibikusapho lwethu ngaphezulu kweminyaka engama-60 kwaye yindawo entle yosapho echibini.
Le renti inamagumbi okulala ama-4 kumgangatho ophambili kodwa unepropathi yonke kuwe njengoko kungekho mntu wumbi uhlala apho. Iholide yechibi eyoyikekayo ilindelwe!
Le ndawo ikhululekile kwaye ikhululekile ngamaplanga omsedare amaninzi ukunika i-cabin ivakale. Siye sahlaziya ukukhanya kunye nefenitshala ukuze senze i-cottage yangoku yokuziva. Le ndawo ineembono eziphefumlayo phambi kwechibi, indawo enkulu ephambili, indawo enkulu enengca kunye nedokhi enkulu yabucala enendawo yokukhwela isikhephe. Ukuqubha okugqwesileyo ngamanzi anzulu.
Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negesi yegesi ekuvumela ukuba wenze konke ukupheka kwi-cottage ukuze ungabi naxhala malunga nokuphuma uyokutya ubusuku ngabunye.
I-lakehouse ineendawo ezimbini zokuhlala ezahlukeneyo. Le ndawo ikumgangatho ophantsi kwaye inamagumbi okulala ama-4 kodwa uya kuba nayo yonke ipropathi kuwe (akukho mntu uhlala okanye uhlala kwigumbi eliphezulu). Onke amagumbi okulala akwelona nqanaba liphambili, amathathu abekwe ngaphandle nje kwegumbi lokuhlala kwaye elinye likwindawo yokuphumla kwasekuseni.
Sinabamelwane abalungileyo kakhulu ngasekhohlo nasekunene kwaye siyathanda ukubacingela.
Le propathi ikwicala laseMpuma lechibi kunye nelanga kude kube semva kwemini. Kungumgama wokuhamba ukuya e-Kool Treat ivenkile ye-ayisikrimu yasekhaya, i-Smoochies kunye ne "From the Hearth Bakery" indawo yokubhaka encinci emangalisayo.
Le ndlwana ikwicala laseMpuma lechibi kunye nelanga kude kube semini. Kungumgama wokuhamba ukuya e-Kool Treat ivenkile ye-ayisikrimu yasekhaya, i-Smoochies ivenkile yekofu ekufuphi kunye ne-Hearth Bakery ivenkile yokubhaka encinci emangalisayo.